Rasaasa News – Cabid Iley iyo Tekle Mariam oo Godey Gaadhay
on April 16, 2014 1:38 am
Godey, Apr 16, 2014 – Xarunta gabalka shabeele ee Godey, waxaa booqasho ku tagay madaxwayne Cabdi Iley iyo wafti heer federal ah oo uu hogaaminayo wasiirka Federalka Tekle Mariam.
Waftigan ayaa sida la sheegay u kuurgalaya mashruuca dib u dajinta beeraleyda ee gabalka Shabeele. Waa markii saddexaad oo wafti heer federal ah oo hubinaya socdka mashruuca hirgalinta dib u dajinta ay ku tagaan gabalka Shabeele.
Dawlada federaalka Atobiya waxay sanadkii 2010, sheegtay in mashaariic loogu yeedhay dib u dajin laga samaynayo afar gabal oo ka mid ah degaanka Somalida. Waxayna bilowday dawladu in ay banayso dhul balaadhan oo ay ku sheegtay in la dajin doono dad loogu yeedhay xoolo dhaqato beeraley.
Dhinaca kale, waxaa si gaar ah u booqanayey gabalada la sheegay in dib u dajin laga samaynayo, maal gashadayaal ka yimid dibada iyo Atoobiyaba, kuwaas oo la tusayey dhulkaas.
Gabalada la sheegay in dib u dajinta laga samaynayo waxay kala ahaayeen; gabalada Shabeele, Jarar, Liibaan iyo Sitti. Waxaa la joojiyey gabalka Jarar ee Baki iyo Birqod, kuwaas oo aan la isku halayn karin amaankooda.
Gabalka Sitti, waxaa maal gashanaya Al Camuudi, isaga oo ka beeri doona suufka. Godey waxaa maal gashanaya maal qabeeno Atoobiyan ah iyo maal qabeeno ka yimid Imaaraadka Carabta.Gabalka liibaan, waxaa loogu talo galay in uu noqdo meelaha tusaalaha loo qaato in dib u dajin la sameeyo.
Dawlada Atoobiya ayaa adeegsanaysa masuuliyiinta maamulka degaanka Somalida, si uu u maaweeliyo shacabka degaanka inta laga diyaarinayo dhulka, kolka dambena la yidhaahdo dad qaata ayaa la waayey.
Arintaas waxaa noo xaqiijiyey masuuliyiin hore madax uga soo noqday mashaariicdan lagu magacaabay dib u dajinta xoolo dhaqato beeraleyda ah, laakiin runtii ah dhul loo diyaarinayo maal gashadayaal shisheeye.
Mudada ay socoto sheekada dib u dajintu waa saddex sano, ilaa iyo maantana ma jiraan dad la diyaariyey dajinta dhulka la baneeyey.
Shacabka gabalka Sitti, ayaa shaki wayn ka muujiyey arintan su,aalna waydiiyey dawlada federal, nasiib daro dadkii su,aasha keenay waa la xidhay, in kasta oo kolkii dambe la siidaayey.
Dawlada Atoobiya ayaa iibsata dhul beereedka degaanada Atobiya, iyaa lacago xoog leh ka qaadata maalgashadayaalka shishiyee, arintaas oo ay WFP, qoraalo ka soo saartay.
Tekle Mariam iyo Cabdi Iley, waxay u xil saaran yihiin diyaarinta dhul beereedka degaanka Somalida ee laga iibiyey shisheeyaha maalqabeenka ah. Ujeedada safarkooduna arimahaas ayuu salka ku hayaa.